लागुऔषधको कुलतबाट छुटकारा पाउन अपनाउनहोुस यस्ता उपाय ! - Everest Dainik - News from Nepal
लागुऔषधको कुलतबाट छुटकारा पाउन अपनाउनहोुस यस्ता उपाय !
काठमाडौं, चैत २६ । –लागुऔषधबाट छुटकारा पाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नो समस्या पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । ड्रग्सका कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा समाजमा असर परिरहेको छ भन्ने बुझेपछि प्रयोगकर्ताले परिवर्तनका लागि निर्णय लिनुपर्छ ।
–तनाव कत्तिको छ, जीवन कसरी चल्दै छ, स्वास्थ्यमा ड्रग्सको असर कति परेको छ, यी र यस्ता प्रश्न
आफैँसँग गर्नुहोस् ।
–आफ्ना लागि ड्रग्सभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के–के छन्, जस्तो– परिवार, करिअर, तपाईंको स्वास्थ्य, तपाईंले माया गरेर घरमा पालेका जनावर, तपाईंकी श्रीमती वा गर्लफ्रेन्ड । यस्ता कुराको सूची तयार गर्नुहोस् ।
–ड्रग्सका कारण तपाईंको जीवनमा के भइरहेको छ र यसलाई त्याग गर्दा तपाईंलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा के–कस्ता फाइदा हुन्छन् भनेर सोच्नुहोस् ।
–तपाईंलाई ड्रग्स छाड्न के कुराले अवरोध गरिरहेको छ भनेर आफैँलाई प्रश्न गर्नुहोस् । यो सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्रतिबन्धित औषधी खुलेआम उत्पादन र बिक्री वितरण
ट्याग्स: Drug, health education